Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. टी-२० विश्वकपबारे अन्तिम निर्णय कहिले ? – Emountain TV
एजेन्सी, १६ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले यसै वर्ष तय भएको आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट आयोजनाबारे आगामी जुन १० तारिख पछिमात्र अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ ।
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको कारण अष्ट्रेलियामा हुने टी–ट्वान्टी विश्वकप हुने नहुनेमा अन्योलता बढीरहेको बेला आईसीसीले जुन १० पछि ठोस निर्णय गर्ने जनाएको हो ।
भिडियो मार्फत बसको आईसीसीको बोर्ड बैठकले विश्वकपसहित अन्य महत्वपूर्ण एजेण्डाबारेको छलफल जुन १० को बोर्ड बैठक सम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, बोर्ड बैठकले आईसीसीको गोपनियता उलंघनबारे अनुसन्धान सुरु गर्ने निर्णय भने गरेको छ । यस्तै आईसीसीको नयाँ अध्यक्षको निर्वाचनबारे पनि जुनपछि निर्णय हुने भएको छ ।
यस अघि आईसीसीले टी–ट्वान्टी विश्वकप र नयाँ अध्यक्ष चयनबारे बिहिबार निर्णय हुने जनाएको थियो । अध्यक्ष शशांक मनोहरको दुई वर्षे कार्यकाल यसै वर्ष सकिदैछ । आईसीसीको आगामी जुलाईको अन्तिममा वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । त्यस समयसम्म आईसीसीले नयाँ अध्यक्ष चयन गर्ने बताईएको छ ।